> Resource > Top List > dabaaldeg Maalinta Aabbihiis kula Quotes
Aabbayaashow, qoysaska intooda badan, waa geesiyaal naga faydo gaar ah. Dhif Waxay abid helaan in qaybtiisii ​​cadaalada ah uusan jabin. Ha Maalinta Aabbahay noqon jidkaaga u faafiyaan fariinta jacaylka. U sheeg aabbihiis sida aadka ah uu u qalmo inuu la qadariyo oo soo dhaweeyay in qofka ugu yaabka leh ee noloshaada.
Si loo caawiyo in aad iftiimin aad kaararka salaan, waraaqo iyo sawrirrada sameeyo Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe in aabbahaa waxaad ka heli doontaa tiro la doortay ee aabbihiis xigashooyin maalin on this page.
Waxaa jira aabbihiis xigashooyin maalintii aabbihiis kasta.
Aabbihiis Qiirada ee xigashooyin maanta
Funny aabbihiis xigashooyin maanta
Aabbahay waa banker ka bixiyaan dabeecada. ~ Faransiis Maahmaah
Nin ogyahay markuu korayo jir ah sababtoo ah waxa uu bilaabaa in uu u eg aabbihiis.
~ Gabriel García Márquez Taasi waa booska badane aabbihiis in qoyska -. bixiyaha u dhan, oo dhan cadowgooda ahaa ~ J. August Strindberg
Aabbihiis digtoonaan ee xigashooyin maalin
Miyaannan jeclaan laba muda ah ka mid ah buugga? ~ Marceline Desbordes-Valmore
Aabbihiis cute ee xigashooyin maalin
Waxa ugu muhiimsan aabbihiis qaban karo ee carruurta waa in ay hooyadeed jecel.
Uma maleynayo kara baahida kasta ee carruurnimada xoog badan sida baahida loo qabo ilaalinta aabbe ee.
Just Cad ah "fiican" aabbihiis xigashooyin maanta
Mid ka mid ah aabbahaa yahay in ka badan boqol schoolmasters. ~ Qarnigii 17-Ingiriisi maahmaah
Iyo xigashooyin badan oo aabbihiis dheeraad ah ayaa maalin
1) Aabbayaasha waa malaa'igo samada ka soo diray. 2) Dad, aad tahay qof si uu u eego in wax dhib ah maleh sida dhaadheer oo aan ku koray. 3) hadiyadda ugu weyn ee aan abid uu ka yimid Ilaah, Waxaan isaga u yeedhaan Dad! 4) Dad, gacantaada ku hogaamiyay ayaan garbaha ku sii jiri doona ila weligiis.
Waa hagaag, ku raaxaysatid akhriska ee aabbihiis xigashooyin maanta!